७ नियमहरु जसले जीवन सजिलो बनाउँछन् - उज्यालो पाटो
सम्झनुस् त, मानिसको अनुहारमा हुने कुराहरु के के छन् ? नाक, आँखा, ओठ, गाला, चिउँडो, आँखीभुइँ यस्तै यस्तै कुराहरु त हुन् । विशेष अवस्थामा बाहेक सामान्यतया हरेक मानिसको अनुहारमा यीनै कुराहरु हुन्छन् तर यो सात अरब मानिसहरुमा उस्तै अनुहार भएका ७ जना भन्दा बढि हुदैनन् भनिन्छ तर ति सात जना पनि उस्तै हुन् कि भन्ने हुन्छन्, दुरुस्तै हुदैनन् । उस्तै कुराहरु मिल्दा पनि अरबौँ असमान अनुहारहरु कसरी बन्छन् होला ? अचम्म छैन त ?
अझ जीवनमा त अनुहारमा भन्दा असाध्यै धेरै संयोगहरु हुन्छन् । हरेक मानिसले फरक परिस्थिति र फरक घटनाक्रम भोग्छ । परिस्थिति, अनुभव र घटनाक्रमहरुले मानिसको जीवन व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ । यस्तोमा हरेक व्यक्तिका लागि मिल्ने नियमहरु बनाउँनु पक्कै पनि चानचुने कुरा होइन तर यहाँ त्यस्ता ७ नियमहरु छन्, जसले भावनात्मकरुपमा नै हरेक मानिसहरुलाई जीवनको सरलतातिर उन्मुख गराउँन सक्छन् ।
यी त्यस्ता ७ नियमहरु हुन् जसले जीवन जिउँन सजिलो बनाउँछन् । यहाँ मैले त्यस्तै ७ नियमहरु संकलन गरेको छु ।
१. आफ्नो विगतसँगको द्वन्द अन्त्य गर्नुहोस्
हामी सबैसँग विगतको कुनै न कुनै दुख हुन्छ नै । यसको अफ्ठ्यारोको मात्रा फरक होला तर हामी सबैले आफ्नो विगतको पोको कतै राखेका हुन्छौँ, जसलाई खोल्दा हामी पिडा र दुख अनुभव गर्छौँ । हामी कहिलै पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । हामी वर्तमानमा विगतसँग विभिन्न अवस्थामा द्वन्दमा हुन्छौ, जसले हामीलाई दुख भन्दा अरु केहि पनि दिदैन ।
बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने जीवन भनेकै अनुभुतिहरुको श्रृंखला हो । त्यसमा एक पछि अर्को जोडिएकै हुन्छ । हामीले केहि गर्न सक्ने भने वर्तमानमा मात्रै हो । विगतको तितो मेटाउँनलाई हामीले वर्तमानमा गर्न सकिने केहि उपायहरु भने यस्ता हुन सक्छन् :
– ति सबैलाई माफी दिनुहोस् जसले तपाईको विगतलाई दुखद बनाए ।
– आफैलाई माफ गर्नुहोस् जहाँ तपाईले गलत निर्णय गर्नु भयो ।
– जीवनमा जे भयो, स्विकार्नुहोस् ।
– नयाँ सुरुवातका लागि आफैलाई तयार पार्नुहोस् ।
२. मान्छेले के भन्छन् ? यो तपाईले ध्यान दिनु पर्ने कुरा होइन ।
‘मान्छेले के भन्छन् ?’ यो वाक्य असाध्यै शक्तिशाली लाग्छ मलाई, उत्तिकै दुखद, उत्तिकै हिंस्रक र उत्तिकै बिडम्बनापुर्ण पनि । कसैलाई दुख नदिए पनि र कसैको हानी नपुर्याइ पनि हजारौँ लाखौँ मानिसलाई आफ्नो जिन्दगी बाँच्न, आफ्नो रहर पुरा गर्न नदिने वाक्य हो यो ।
‘मान्छेले के भन्छन् ?’ भन्नै सोच्दै नसोची आफ्नो जीवन बाँच्न सबै स्वतन्त्र छन् र हुनु पर्छ तर आफ्नो जीवन स्वतन्त्र र चाहे जस्तो बनाउँने लहडमा अनैतिक र अमर्यादित बन्न नपुगोस्, कसैको जीवन अफ्ठ्यारोमा नपरोस्, कसैलाई कुनै किसिमको क्षति नपुगोस्, यति हेक्का चै हुनै पर्छ ।
३. तपाईको खुसीको कारण तपाई मात्रै हो
खुसी कहाँ छ ? तपाईमा । तपाईले चाहनु भएन भने संसारभरका सबै राम्रा कुराहरु पाएर पनि तपाई खुसी नभइदिन सक्नु हुन्छ । त्यस्तै तपाईले चाहनु भयो भने संसारभरका कुनै पनि कुराले तपाईको खुसीलाई रोक्न सक्दैनन् ।
हामी धेरैलाई खुसी र सुख बिचको फरक छुट्याउँन गाह्रो हुन्छ । सुख भौतिक कुरा हो । सुख पाउँन अरु कुराहरुको आवश्यकता पर्छ । तपाईलाई यात्रामा कुन कुरा भए सुख हुन्छ भन्ने कुरा छुट्याउँन गाह्रो हुदैन । पक्कै पनि हिड्नु भन्दा साइकलमा, साइकल भन्दा मोटरसाइकलमा र मोटरसाइकलमा भन्दा कारमा सुख हुन्छ । अझ कारका पनि स्तर छन् । यो सुख भन्ने कुरा तुलनात्मक हुन सक्छ तर खुसी तुलनात्मक हुदैन ।
यात्रा गर्दा पैदल हिड्दै मनका कुरा गर्दै हिड्नुमा जुन खुसी प्राप्त हुन सक्छ, त्यो खुसी महंगो कारमा एक्लै सवार भएर नहुन सक्छ । यसैले यो सफलता वा यो वस्तु प्राप्त भए पछि खुसी हुन्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् । खुसी आफुले आफुलाई मात्रै दिन सकिन्छ । तपाईको खुसीको कारण तपाई मात्रै हुन सक्नु हुन्छ ।
४. आफ्नो जीवनलाई अरुसँग तुलना नगर्नुहोस्
तपाई जस्तो संसारमा कोही पनि छैन । तपाईले भोगेको जस्तो जीवन संसारमा कसैले पनि भोगेको हुदैन । तपाईले जस्तो अनुभव र अनुभुति अरु कसैले गर्न सक्दैन । यसैले तपाई विशेष हुनुहुन्छ । आफुलाई वा आफुले भोगेको जीवनलाई वा आफुले पाएको सफलता वा असफलतालाई अरुसँग तुलना नगर्नुहोस् ।
तुलना गर्नु खुसीको अन्त्य हो । अझ तुलना दुखको कारण हो । जति कम तुलना गरिन्छ, त्यति दुखहरुबाट टाढा बस्न सकिन्छ । मानिसलाई उनीहरुकै रुपमा भेट्नुहोस् । कसैलाई पनि आफ्नो क्षमतासँग तुलना नगर्नुहोस् । तपाईले आफु प्रतिको अविश्वासलाई अरु प्रतिको इर्ष्या, डर, घृणा र पिडामा पुर्याउँनु हुदैन ।
५. समयले लगभग सबै कुराको उपचार गर्छ समय दिनुहोस्
तपाईले फोहोर भएको पानीलाई हेरेर चलाइराख्नु भयो भने त्यो पानी कहिलै सङ्लो हुन सक्दैन । त्यसका लागि धैर्यता चाहिन्छ र केहि समय पानीलाई नचलाइ छोडिदिनु पर्छ । अनि मात्रै फोहोर थिक्रिदै जान्छ वा सतहमा जम्मा हुदै जान्छ । फोहोर थिक्रिए पनि वा सतहमा जम्मा भए पनि त्यसलाई हटाउँन सजिलो हुन्छ ।
दुखको अवस्था भने सफा पानीमा फोहोर भए जस्तै हो । तपाईले त्यो दुखलाई हटाउँन जति हतार गर्नु हुन्छ, त्यो त्यति नै फोहोर हुदै गर्छ र त्यसलाई सङ्लिन उत्ति नै धेरै समय लाग्छ । यसैले धैर्यता लिनुहोस् । समयलाई छोडिदिनुहोस् । समयसँगै धेरै कुराहरु ठिक हुदै जान्छन् ।
६. धेरै सोच्न बन्द गर्नुहोस् किनकि सबै कुराको जवाफ पाउँन जरुरी छैन
संसारमा भएका सबै कुराहरु हाम्रो नियन्त्रणमा हुदैनन् भन्नेमा त हामी जानकार छौँ । त्यस्तै हाम्रै जीवनमा हुने कुराहरु पनि हाम्रो नियन्त्रणमा हुदैनन् । नियन्त्रणमा भएका कुराहरुप्रति हामीले गरेको निर्णय पनि सबै सहि नहुन सक्छन् । यस्तोमा हामीमा प्रश्नहरु आउँछन् । किन ? कसरी ? आदि ।
त्यस्तै सम्बन्धमा पनि विभिन्न प्रश्नहरु आउँन सक्छन् । हरेक कुराहरुबाट सुरक्षित हुन हामी सकेसम्म धेरै कुरा सोच्ने गर्छौँ । सोच्नु राम्रो हो । यसले सजग गराउँछ तर अत्याधिक सोच्नु सजगता होइन । अत्याधिक सोच्ने कुराले हामीले पाएका खुसीका अवसरहरुमा पनि सन्देह उत्पन्न हुन्छ । यसैले धेरै सोच्न बन्द गर्नुहोस् । धेरै कुराहरु हाम्रो जीवनमा आउँछन् र जान्छन् । तिनलाई त्यहि रुपमा लिनु पर्छ । अनि हाम्रो मनमा आएका सबै प्रश्नहरुको जवाफ पाउँन जरुरी पनि हुदैन ।
७. मुस्कुराउँनुहोस्, संसारका सबै समस्या तपाईका मात्रै होइनन्
यो संसारमा दुख नै नभएको को होला ? पक्कै पनि कोही हुदैनन् । किनकि हामीले सुनेका छौ, हामीले एकदमै सफल मानेकाहरुले आफ्नै जीवनबाट वाक्क भएर आत्महत्या गरेका छन् । समस्याबाट मुक्ति दिने भनेको न पैसाल हो, न सामर्थ्यले हो, न प्रसिद्धिले हो । समस्याबाट मुक्ति पाउँने आफैले मात्र हो ।
संसारमा सबै मानिसमा समस्या हुन्छन् । समस्याका आकार र प्रकार साना ठुला र फरक होलान् तर समस्या नभएको मानिस कतै पनि हुदैन । यसैले आफुले मात्रै समस्या भोगिरहेको भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनै पर्छ । ति सबै कुरा बिर्सिएर मुस्कुराउँनै पर्छ ।
भनाइ छ नि, केहि सेकेन्ड मुस्कुराउँदा तस्विर सुन्दर बन्छ भने धेरै समय मुस्कुराउँने हो भने जीवन कति सुन्दर बन्थ्यो होला ।